चीनबाट रोगी ल्याउन लागेको होइन : सरकार – indepth.com.np
भक्तपुरको खरिपाटी र नगरकोटमा भइरहेको तयारीबारे जानकारी दिँदै स्वास्थ्य सेवा विभागका डा. फणिन्द्रराज बराल । तस्बिरहरु तथा भिडियो : ईश्वरकाजी खाइजू
स्थानीय भन्छन्, भक्तपुरमा राख्न हुन्न
भक्तपुर । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका ७ खरिपाटीस्थित विद्युत तालिम केन्द्रमा सरकारले चीनको वुहानबाट ल्याइने विद्यार्थीहरुलाई क्वारेन्टाइन बनाएर राख्ने तयारी तीव्र बनाएको छ । तर स्थानीयले वासिन्दाले भने तालिम केन्द्र बस्तीबीचमा रहेकाले त्यहाँ क्वारेन्टाइन नबनाउन माग गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय चाँगुनारायण नपाले पनि खरिपाटीको विकल्प खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
स्थानीय वासिन्दा र चाँगुनारायण नपाले चीनबाट ल्याइने विद्यार्थीहरुलाई खरिपाटीमा राखिए कोरोना भाइरसको संक्रमण पूरै बस्तीमा फैलिने तर्क दिँदै आएका छन् । उनीहरुले चीनमा रहेका विद्यार्थीहरुलाई छिटोभन्दा छिटो उद्दार गरेर अन्यत्रै सुरक्षित स्थानमा राख्न माग गर्दै आएका छन् । सरकारले आफूहरुको मागको सुनुवाइ नगरेपछि खरिपाटीका स्थानीयहरु उक्त स्थान छोड्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । स्थानीय प्रकाश लामिछानेले आफूहरुले विरोध गर्दा पनि सरकारबाट सुनुवाइ नभएपछि स्थानीय वासिन्दा धमाधम घर छाड्ने तयारीमा लागेको सुनाए ।
खरिपाटीपछि सरकारले चाँगुनारायण नपा ६ नगरकोटस्थित सरसफाइ तालिम केन्द्रमा समेत चीनबाट ल्याउने विद्यार्थीहरुलाई राख्ने भएपछि त्यसको विरुद्धमा स्थानीय उत्रिन थालेका छन् । तर सरकारले चीनबाट कोरोना भाइरस संक्रमण भएका रोगी नेपाली विद्यार्थी ल्याउन नलागिएको स्पष्टीकरण दिँदै आएको छ ।
`सरकारले चाङ्गुनारायणमा रोगी ल्याउन लागेको होइन´
Posted by ईश्वरकाजी खाइजू on Wednesday, February 12, 2020
चाँगुनारायणका दुवैतिर स्थानीयबाट विरोध भएपछि स्वास्थ्य सेवा विभाग तथा टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सकहरुले स्थानीय वासिन्दा तथा चाँगुनारायण नपाका जनप्रतिनिधिहरुसँग अन्तरक्रिया गरेका छन् ।
तालिम केन्द्रमा १८० जना राखिने
चाँगुनारायण नपाको सभाकक्षमा भएको कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका वरिष्ठ अधिकृत डा. फणिन्द्रराज बरालले चीनबाट सरकारले कोरोना भाइरसका रोगी ल्याउन नलागिएको स्पष्ट पारे ।
चीनमा अध्ययनरत करिब एकसय ८० विद्यार्थीहरुलाई घरमा सुरक्षित पठाउनुअघि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार १५ दिने निगरानीमा राख्न खरिपाटीमा ल्याउन लागिएको उनले जानकारी दिए ।
‘कुनै पनि संक्रमण फैलिँदैन’
उनले स्थानीयले आशंका गरेजस्तो खरिपाटीस्थित क्वारेन्टाइनबाट कुनै पनि किसिमको संक्रमण बाहिर नजाने व्यवस्था सरकारले गरिसकेको जिकिर गरे । यसको लागि स्थानीयको समेत नियमित स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गरिने उनको भनाइ थियो ।
डा. बरालका अनुसार क्वारेन्टाइनमा राखिएका कसैलाई पनि कोरोना वा अन्य भाइरसको संक्रमण देखिए तत्काल सुरक्षित उद्धार गरी विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको अस्पतालमा लगेर उपचार गरिनेछ ।
विभागले खरिपाटीस्थित विद्युत तालिम केन्द्रका चारवटा भवनमा अहिले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिरहेको छ । जसअनुसार एउटा भवनमा महिला, दुइटामा पुरुष र अर्कोमा उनीहरुको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य टोली रहनेछ । साथै तालिम केन्द्रमा एउटा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा रहने विभागले जनाएको छ ।
सरकारले वाइड बडी विमान पठाएर चीनको वुहानमा रहेका विद्यार्थीहरुलाई नेपाल ल्याइनेछ । नेपाल पुगेका उनीहरुलाई पाँचवटा बसमा सुरक्षित खरिपाटी पु¥याइने उनले जानकारी दिए ।
एउटा कोठामा तीनजना राखिने
यसरी खरिपाटी पु¥याइएकामध्ये प्रत्येक कोठामा तीनतीन जना विद्यार्थीहरुलाई राख्ने प्रवन्ध मिलाइएको छ । यसरी बस्ने तीनजनामा पनि कम्तीमा एकमिटरको दूरी कायम गरिने छ ।
विभागका अनुसार स्वास्थ्य टोलीमा एक चिकित्सक, एक पारामेडिक्स, एकजना नर्स र एकजना एम्बुलेन्स चालक रहनेछन् ।
क्वारेन्टाइनमा रहने विद्यार्थी तथा स्वास्थ्य टोलीलाई तालिम केन्द्रको क्यान्टिनबाटै सुरक्षित तवरले खाना तथा खाजाको व्यवस्था गरिने वरिष्ठ अधिकृत डा. बराल बताउँछन् ।
‘क्वारेन्टाइनमा रहेका विद्यार्थीहरुलाई भेट्न आउने अभिभावक तथा आफन्तलाई पनि कुनै संक्रमण नहुने व्यवस्था गर्ने भएका छौं’, उनले भने, ‘करिब १५ दिनको निगरानीपछि कुनै संक्रमण पुष्टि नभए उनीहरुलाई घर फिर्ता पठाउनेछौं ।’
उनका अनुसार वाइड बडीका चालक दललगायतको टोलीलाई भने नगरकोटस्थित सरसफाइ तालिम केन्द्रमा राखिने छ ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले चीनबाट उद्धार गरेर ल्याउने विद्यार्थी र चाँगुनारायणका स्थानीय वासिन्दाको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी सरकारले लिने आश्वासन दिए ।
उनले कोरोना भाइरसबारे धेरै चिन्ता नलिन आग्रह गर्दै धेरै चिन्ता लिनु पनि एक रोग भएको बताए ।
कार्यक्रममा चाँगुनारायण नपा ६ र ७ का वडा अध्यक्षद्वय क्रमशः सन्ते वाइबा र ज्ञानबहादुर केसीले आफूहरुसँग समन्वय नगरिकनै आआफ्नो वडामा विद्यार्थीलगायतलाई राख्न लागिएकोमा आपत्ति जनाए ।
‘वडा कार्यालय जलाउने स्थानीयको धम्की’
उनीहरुले जनतामा कोरोना भाइरसको त्रास र सरकारको कार्यशैलीप्रति आक्रोश दुवै भएको र सरकारबाट आफूहरुको माग सुनुवाइ नभएपछि स्थानीयले वडा कार्यालय जलाउने धम्की दिएको जानकारी दिए ।
उनीहरुले सरकारको व्यवस्थापन क्षमतामाथि विश्वास नभएको भन्दै डेंगु रोक्न नसक्ने सरकारले कोरोना भाइरस फैलिनबाट रोक्छ भन्ने जनतामा विश्वास नभएको धारणा राखे ।
चाँगुनारायण नपाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले चाँगुनारायण नपालाई सरकारले कोरोना भाइरसको डम्पिङ साइट बनाउन खोजेको तर आफूहरुलाई मान्य नभएको बताए ।
डाइलासिस सेन्टर सञ्चालन गर्न नपाले तालिम केन्द्रका केही भवन माग्दा नदिने सरकार क्वारेन्टाइन बनाउन उद्यत हुनु आफूले बुझ्न नसकिने कुरा भएको उनको भनाइ थियो ।
तालिम केन्द्रमा क्वारेन्टाइन बनाउने भए नपालाई भवन निर्माण गर्न तालिम केन्द्रको जग्गा वा भवन उपलब्ध गराउन प्रमुख मिश्रले सरकारसँग माग गरे ।
भक्तपुरबाट लागूऔषधसहित पाँच पक्राउ
मोटरसाइकल दुर्घटनामा घाइते कलवारको मृत्यु
मध्यपुर थिमि नपामा एक्लिए प्रमुख श्रेष्ठ
ठिमी प्रहरीद्वारा अवैध घरेलु मदिरा नष्ट
रिचार्ज कार्ड पछ्याउँदै जाँदा चोरीका चार मोटरसाइकलसहित ३ युवा नियन्त्रणमा